सुर्खेतमा सुन मिसावट काण्ड,वर्षाैंदेखि ग्राहक ठगिए - Deutikhabar सुर्खेतमा सुन मिसावट काण्ड,वर्षाैंदेखि ग्राहक ठगिए - Deutikhabar
सुर्खेतमा सुन मिसावट काण्ड,वर्षाैंदेखि ग्राहक ठगिए
देउतीखबर बिहिबार, अशोज ७, २०७८
सुर्खेतमा सुन किन्दै हुनुहुन्छ, होशियार ? ठगिनु होला नि
सुर्खेतका सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सुनमा मिसावट गरी लाखौ ग्राहकलाई ठगेको खुलासा भएको छ । बर्षौदेखि सुनचाँदी व्यवसाय गर्दै आएका उनीहरुले सुनमा चाँदी, जींक र तामा मिसाएर ग्राहकलाई ठगेको खुलेको हो । टंच मेसिन सुर्खेतमा भित्रिएसँगै सुनमा ठगिको रहस्य खुलेको हो ।
वर्षमा झण्डै २० किलो बढी सुन कारोबार हुने सुर्खेतमा एक तोला सुनमा झण्डै चार आना अन्य धातु मिसावट भएको पाइएको छ । जब कि एक तोलामा १६ आना सुन हुन्छ । व्यवसायिले १२ आना सुनको मूल्यलाई १६ आना भन्दै उपभोक्ताबाट रकम लुटेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ । बुधबार टन्च मेसिनमा एक ग्राहकको गहना तौलिँदा चार आनाको फरक परेको हो ।
सुन व्यवसायीलाई सुनमा दुई प्रतिशत मिसावट गर्न पाइने प्रावधान नै छ । सुन आफै नजोडिने भएकाले जींकले जोड्नलाई सो प्रावधान गरिएको हो । टंच मेसिन सुर्खेतमा मित्रिएसँगै व्यवसायीले सुनमा मिसावट गरेको रहस्य खुलेको हो । त्यति मात्र होइन ग्राहक दोहोरो ठगिको मारलाई थेगिरहेका छन् । ग्राहक सुनको मुल्यमा मिसावट चाँदी, जींक र तामा किनिरहेका छन् भने अर्कोतर्फ साढे बाह्र प्रतिशत ज्याला जर्तिका नाममा पैसा पनि तिरिरहेका छन् । ‘हामी त दुइतिरबाट लुटिएका पो रहेछौ ।’
लाटिकोइलीकी प्रतिमा गुरुङले भनिन् । संस्कृति ज्वैलर्सले टंच मेशिनमा सुनको मात्रा नापेर विक्रि वितरण गर्न थाले पछि सुन चाँदी व्यवसायमा हलचल मच्चिएको छ । मेशिनमा सुनको मात्रा नाप्नेहरुको घुइँचो लागेको छ भने पहिले सुन किनेको पसलमा पुगेर पैसा फिर्ता माग्नेक्रम बढेको छ । पछिल्लो समयमा सुन व्यवसायीबाट आफुहरु ठगिएको ग्राहक माझ भुसमा आगो लागेझै फैलिएको छ । स्रोतका अनुसार व्यवसायीहरुले यसरी ठगिरहेका छन् की सुन बेच्दा अन्यधातु मिसाइ बेच्छन्, अनि सोही सुन पुन किन्दा अन्यधातु फालि शुद्ध सुन किन्नेर ब्रम्ह लुट गरिहेका छन् ।
रसान गएको नाममा उनीहरुले ठगिरहेका छन् । सुर्खेतमा सुनचाँदी व्यवसायीहरुले सिण्डीकेट नै गरेका छन् । नयाँ व्यवसायीलाई संघमा दर्ता हुनमा पनि सिण्डिकेट जस्तै छ । सुन चाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद कौशल भने त्यसमा सत्यता नभएको जिकीर गर्छन, भन्छन् । ‘बाहिरबाट आउँदा नै मिसावट भएर सुन आउने गरेको छ । सस्कृती ज्वलर्सले हाम्रा ग्राहक भड्काउन भ्रम फैलाएको छ ।’ उनको उल्टो आरोप छ । उता सँस्कृती ज्वलर्सका सञ्चालक कमल खड्का भन्छन, ‘मेसिन कसैको व्यापारलाई असर गर्नलाई ल्याइएको होइन, ग्राहकलाई शुद्ध सुन दिनलाई हो ।’
भैरहवा सुनचाँदी पसलका सञ्चालक रिमबहादुर विश्वकर्मा भन्छन्, ‘विगतमा भएका कमिकमजोरीलाई सच्चाउँदै अगाडि बढ्न तयार छौ ।’ उनको यो भनाइबाट पनि प्रष्ट हुन्छ कि, सुनमा मिसावट भएको छ । सुर्खेत सुनचाँदी व्यवसायी संघका अध्यक्ष ताराप्रसाद कौशल भन्छन्, ‘हामीलाई कालिगढले फसाए ।’
यता कालिगढले केही दिन देखि काम गर्न छाडेका छन् । कालिगढमाथि आरोप लगाइएको भन्दै उनीहरुले टंच मेसिनबाट नापेको सुन मात्र लिएर बनाउने अडान लिएका छन् । एक कालिगढ नाम नभन्ने शर्तमा भन्छन् ‘आफ्ना कतुर्तहरुलाई ढाकछोप गर्न हाम्रा नाममा दोष थुपार्न पाइन्छ ? पैसा साहु कमाउने, दोष हामी माथि ?’ ज्याला जर्तिका नाममा लिएको साढे बाह्र प्रतिशत रकमबाट पनि ४ प्रतिशत रकम साहुले नै लिने गरेका छन् ।
बषौ देखि व्यवसाय गरिरहेका सुन चाँदी व्यसायीहरुले हालसम्म कति किलो सुन बेचे होलान् । प्रत्येक तोलामा मिसावट गरी बेच्दा कति ग्र्राहक ठगिए होलान् अनुमान लगाउँदा पनि आश्चर्य लाग्छ । तर सँस्कृति ज्वैलर्सको टन्च मेसिनका अनुसार यथार्थ यही नै हो । ‘बेचेको सुन फिर्ता लिन तयार छौ’ पोखरा सुन चाँदी पसलका सञ्चालक दिनेश विश्वकर्मा भन्छन् । सुन फिर्ता लिन तयार हुनुको यथार्थता सुनका नाममा व्यवसायीहरुले ग्राहकहरुलाई ठगिरहेका छन भन्ने नै हो ।
प्रमुख जिल्ला अधिकारी महादेव पन्थ भन्छन् ‘यस्तो केस पहिलो पटक आएको हो, नापतौल विभागको समन्वयमा आवश्यक अनुसन्धान गरी कानुनी कारबाही अगाडि बढाउँछौ ।’ यति बेला सुन व्यापारको समय हो । यसैबेला ठगिको आरोपले व्यवसायी अत्तालिएका छन । kankrebihar daily बाट
प्रकाशित मिति: बिहिबार, अशोज ७, २०७८
दुल्लूमा युवा नेता सुशिल थापा पहिलो नम्बरमा सिफारिस
कर्णाली प्रदेशस्तरीय शैक्षिक मेला :राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय शैक्षिक संस्थाहरुका प्रदर्शनी